Fari-dranomasin’i Madagasikara : tombanana 500 tapitrisa dolara isan-taona ny harena very | NewsMada
Fari-dranomasin’i Madagasikara : tombanana 500 tapitrisa dolara isan-taona ny harena very
Miantoka ny fampandrosoana ny toekarena aty amin’ny fari-dranomasimbe Indianina ny fandriampahalemana, indrindra fa amin’izao endriky ny fifandraisana ara-diplomatika maneran-tany ankehitriny izao. Ho fitandrovana izany fandriampahalemana aty amin’ny ranomasimbe Indianina izany indrindra ny antony fiaraha-midinika iraisam-pirenena tarihin’ny CEDS*. Nanokatra ny fotoana, omaly ao amin’ny Carlton, ny filohan’ny Repoblika Rajaonarimampianina Hery.
« Filaminana aty amin’ny ranomasimbe Indianina sy ny manodidina ao anatin’ny tontolon’ny firehana maro karazana feno fiovana eo amin’ny lafiny politika sy ny toekarena”. Izany ny lohahevira nosafidin’ireo mpivory, hamakafakana ny tontolo aty anivon’ny ranomasimbe Indianina manontolo, tsy mijanona amin’ireo Nosy manodidina ihany. Ahoana ny hahafahana miasa bebe kokoa amin’izany faritra izany hisian’ny fampandrosoana marina hipaka eto Madagasikara ?
Madagasikara, manana ny toerany mampiavaka azy aty amin’ny faritra. Mety hampidi-doza izany nefa koa mety hitondra fampandrosoana goavana. Koa eo amin’ny politika fifandraisana amin’ny any ivelany ny tokony handraisana fepetra dieny izao hitandrovana ny fandriampahalemana. Tombanana 500 tapitrisa dolara isan-taona ny very amin’i Madagasikara noho ireo harena maro isan-karazany misy mangalatra aty amin’ny fari-dranomasina misy antsika. Mitaky fiaraha-miasa ny fiarovana izany, toy ny vao nanoloran’i Etazonia sambo haingam-pandeha ho mpiaro ny morontsiraka. Araka izany, ilaina matotra ny diplomasia amin-dry zareo Amerikanina sy amin’ny firenen-kafa.
Afrika Atsimo sy Inde
Nosinganin’ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny CEDS, Rasoarahona Solofo, firenena roa, i Afrika Atsimo, tsy lavitra antsika sy i Inde any Azia. Ny filaminana sy fandriampahalemana ao Afrika Atsimo, miantoka ny fitoniana sy tombontsoa lehibe aty amin’ny faritra. I Afrika Atsimo manana ny lanjany ara-toekarena aty amin’ny faritra Afrika manontolo. Ho an’i Madagasikara manokana, tombontsoa lehibe ny fifandraisan’ny firenena roa tonta, ary vao nilaza ny hanangana orinasa eto an-toerana ry zareo Afrikanina Tatsimo. Miantoka ny filaminana aty amin’ny fari-dranomasimbe Indianina koa ny diplomasia indianina. I Inde, firenena fahefatra matanjaka indrindra eran-tany, ary ho fahatelo amin’ny taona 2020.
CEDS * : Centre d’études diplomatiques et stratégiques.